Ich bin die Frau von Pilatus | Weltweite Kirche Gottes Schweiz - Weltweite Kirche Gottes Schweiz
Nifoha tampoka aho nony alina, tora-kovitra ary nihozongozona. Nibanjina ny valindrihana aho ary nieritreritra ny nofinofiko momba an'i Jesosy. Fa ny feo tezitra tonga tamin'ny varavarankelin'ny trano fonenantsika dia nampody ahy tamin'ny zava-misy. Nanahy mafy ahy ny vaovao momba ny nisamborana an'i Jesosy fa hisotro ronono hariva. Tsy fantatro ny antony niampangana azy ho nanao heloka bevava izay mety hamoy ny ainy. Nanampy olona maro sahirana izy.
Avy teo am-baravarankeliko dia nahita ny sezan'ny mpitsara izay niatrika ny fihainoam-bahoaka i Pilato vadiko, governora romanina. Henoko izy nikiakiaka hoe: "Iza no tadiavinao? Iza no tokony halefako ho anao, Jesosy Barabbas na Jesosy, izay voalaza fa Kristy? ».
Fantatro fa tsy afaka midika izany fa ny zava-nitranga nandritra ny alina dia tsy tsara ho an'i Jesosy. Nieritreritra angamba i Pilato fa ny vola natsangana dia hanafaka azy. Tezitra mafy ny vahoaka noho ny fiampangana mivaingana nataon'ireo mpisoronabe sy loholona saro-piaro, ka niantso izy ireo fa tokony hohomboana i Jesoa. Ny sasany tamin'izy ireo dia olona izay nanaraka azy na aiza na aiza herinandro talohan'izay ary nahazo fanasitranana sy fanantenana.
Jesosy nijoro irery, nohamavo ary nolavina. Tsy mpanao ratsy izy. Fantatro ary izany ary ny vadiko mahalala izany ihany koa, saingy tsy voafehy intsony ny zava-drehetra. Nisy olona voatery niditra an-tsehatra. Noraisiko tamin'ny sandriny ny mpanompo iray ary nangataka taminy mba hilazana an'i Pilato fa tsy misy zavatra ilaina amin'ireto tranga ireto ary hijaly be aho satria nanonofy an'i Jesosy. Fa tara anefa. Nanaiky ny fangatahany ny vadiko. Tao anatin'ny fiezahana maloto hanesorana ny andraikitra rehetra, dia nanasa ny tanany teo anoloan'ny vahoaka izy ary nanambara fa tsy manan-tsiny tamin'ny ran'i Jesosy. Niala teo amin'ny varavarankely aho ary nilatsaka tamin'ny gorodona nitomany. Ny fanahiko dia naniry an'ity lehilahy be famindram-po sy fanetren-tena izay manasitrana hatraiza hatraiza ary manafaka ny ampahorina.
Rehefa nahantona teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy, ny tara-pahazavana hariva dia namelona ny haizina manimba. Avy eo, rehefa niraraka i Jesosy, nihozongozona ny tany, nisaraka ny vato, ary nirodana ny rafitra. Nivoha ny grave ary namoaka ny olona maty izay velona indray. I Jerosalema rehetra dia nanjary nandohalika. Nefa tsy ela. Ireo tranga nahatsiravina ireo dia tsy ampy hampitsaharana ny mpitondra jamba jamba. Niakatra teo ambonin'ny korontam-bato ry zareo tamin'i Pilato ary niara-nioko taminy mba hahazoana antoka ny fasan'i Jesosy mba tsy hahafahan'ny mpianatra mangalatra ny vatany ary nilaza fa nitsangana tamin'ny maty izy.
Efa telo andro izay no lasa ary ny tena mpianatr'i Jesosy dia manambara fa velona tokoa izy! Naniry mafy hahita azy ireo izy ireo! Ireo izay niverina avy amin'ny fasan'izy ireo dia mandeha eny an-dalamben'i Jerosalema ankehitriny. Faly be aho ary tsy sahy milaza amin'ny vadiko. Nefa tsy hiala sasatra aho raha tsy mahita bebe kokoa momba an'io lehilahy mahagaga io, dia i Jesosy izay manohitra ny fahafatesana ary mampanantena fiainana mandrakizay.